यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सु; त्केरी पूरा पढ्नुहोस् - समृद्ध नेपाल
अष्ट्रेलियाका एक पुरुषले तीन तीन पटक सुत्केरी भएर बच्चा जन्माएका छन् । बच्चालाई जन्म दिने व्यक्ति ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन्। विश्वको पहिलो ग; र्भवती यी पुरुषले तीन बच्चा जन्माइसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार थोमस बैटीले सन् २००७ मा पहिलो पटक ग; र्भवती पुरुष बनेका थिए । उनले यो काम गरेर ट्रान्सजेन्डर पुरुष जो सँग महिला प्रजनन अंग छ उनले एक बच्चालाई सजिलै जन्माउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन् ।
यौ; न अंग परिर्वतन गरेपछि पुरुष बनेपछि पनि बच्चा जन्माउन इच्छा गरेमा कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । लिं; ग परिवर्तनपछि पनि बच्चाको चाहनाले धेरैले बच्चा जन्माउने लहर नै चल्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
म संग राति बस्नु चाहनु हुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस मेरो मन बुझाउनेलाइ प्राथमिकता दिने छु ! नम्बरको लागि मेरो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस !
बिहेको लागी केटा चाहियो मलाई जुन जातको केटा भएनी हुन्छ, असल र इमानदार चाहियो !
धेरै चिलाए पछि लाइभ बस्दै हातैले यस्तो गरे यी महिलाले ( भिडियो सहित )
हट नायिका दिशा पटानीका तस्विरले बलिउडमा हंगामा ! भिडियो सहित
आफ्नो बुडालाइ छलेर अर्को केटा संग भिडियो कलमा बोल्दा यस्तो भिडियो भयो लिक (भिडियो सहित )
नया काण्ड भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होस् !
आन्टीको प्यास बुझाउने कोहि भएन ! ठेगाना सहित
ससुराले बुहारीलाई यसरि बिताए भयो बबाल ! भिडियो सहित
हेर्न मन भए फोटोमा छुएर हेर्नुहोस लुगा आफै हट्छ !
मेरो राती किन यति धेरै चिलाउछ !